कोरोनाबाट कसरी जोगिने ? संक्रमणपछि शरीरमा कस्तो हुन्छ परिवर्तन ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कोरोनाबाट कसरी जोगिने ? संक्रमणपछि शरीरमा कस्तो हुन्छ परिवर्तन ?
प्रकाशित मिति: २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमणसंगको डाक्टरहरुको लडाई यस्तो भएको छ कि मानौ अपरिचित दुश्मन संग युद्ध लडिरहेको जस्तो छ ।
एल क्लासिको : रियलमाथि बार्सिलोनाको सानदार जित
एजेन्सी । स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा बार्सिलोनाले रियल मड्रिडलाई ३–० ले हराएको छ । […]
नयाँदिल्ली । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र […]
एमालेको बृहत् कार्यकर्ता भेला राजधानीमा हुँदै
माघ ५ ।काठमाडौ,तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुने वा नहुने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न नेकपा एमालेले सोमबार […]
कुट्टोले हानेर युवकको हत्या
भदौ १८, पाल्पा । रामपुर नगरपालिका–४ देवीस्थानमा शनिबार साँझ एक युवकको हत्या भएको छ । हत्या हुनेमा रामपुर […]
काठमाडौं । लामो छलफलपछि श्रीलंका सरकारले अन्तत: मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर […]
नेपालीकाे ज्यान विदेशी औषधि परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला
काठमाडौं । विदेशमा उत्पादित नयाँ–नयाँ भ्याक्सिन र औषधिको प्रभावकारिता जाँच्न नेपालीलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ […]